Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 11 | IPhone nhau
Zuva rasvika apo patinogona kugadzirisa yedu inoenderana iPhone, iPad kana iPod touch kune yazvino vhezheni yeIOS 11, vhezheni inounza kwatiri huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva asi zvakare inotitaridza shanduko yekushongedza mumazhinji mafomu ekushandisa, zvichitevera marongerwo akashandiswa muApple Music app. Mumaawa mashoma iwe uchakwanisa kunakidzwa nenhau dzese dzainounza kwatiri, nhau dzatinonyatso tsanangura muchinyorwa chino pamwe nemavhidhiyo akasiyana kuitira kuti tarisa usati wagadziridza nezvauchawana.
Iyi yegumi neimwe vhezheni yeIOS yakatarisa kunyanya paIpad, chishandiso icho mushure mekuchigadziridza icho kuIOS 11 chichatipa kugadzirwa kwakakura kupfuura kusvika ikozvino, nedoko rekushandisa, yakavandudzwa multitasking, kugona kudhonza uye kudonhedza mifananidzo kana zvinyorwa pakati pekushandisa kuwedzera mukuenderana kweApple Penzura pamwe nezvose native ecosystem kubva kuApple pane iyo iPad.
1 Chii chitsva muIOS 11 ye iPhone
1.1 All Notices dziripo
1.2 Kutya Mamiriro
1.3 Imwe-ruoko khibhodi
1.4 Sunungura zvisina kushandiswa zvinoshandiswa
1.5 Meseji dzinoenderana kuICloud
1.6 Mimwe mhedzisiro muiyo Meseji app
1.7 Kuwanika kumaphasiwedi
1.8 Goverana Wifi neshamwari
1.9 Mhoro kuFacebook neTwitter
1.10 Nyowani App Chitoro
1.11 Calculator nyowani nePodcast app
1.12 Yakagadziriswa vhoriyamu bar
1.13 Yakawedzeredzwa modhi pane yekuvhara skrini
1.14 Idzva rekuvhara icon
1.15 Mifananidzo yeDock hairatidze zvinyorwa zveapp
1.16 Idzva uye rakagadziriswazve Kudzora Center
1.17 Nzvimbo nyowani yekuwedzera mwenje mutochi
1.18 Rekisheni rekodhi
1.20 Gadzira yakatarisa chiso cheApple Watch
1.21 Tsigiro yeGIFs pane reel
1.22 Rarama Mapikicha zvakajeka kupfuura nakare kose
1.23 Mafirita matsva
1.24 QR inoenderana
1.25 Bvisa chishandiso kubva kuZvirongwa.
1.26 NFC yemunhu wese
1.27 Gadzira matafura muApple Notes
1.28 Mamwe mazwi echisikigo aSiri
1.29 Siri chaiyo-nguva dudziro
1.30 Nyorera Siri
1.31 Makuhwa kuApple Music shamwari dzako
2 Chii chitsva muIOS 11 yePadad
2.2 Kunyorera doko
2.3 Nyowani Multitasking
2.4 Dhonza uye udonhedze
2.5 Apple Penzura inonyanya kukosha
2.6 Mutsva QuickType keyboard
3 Chii chitsva muIOS 11 yakasarudzika kune iPhone X, iPhone 8 uye iPhone 8 Uyezve
3.1 Kuvhenekera mu Portraits.
4 Maitiro ekuvandudza kune iOS 11
4.1 Ndiwedzere kana kuisa kubva pakutanga?
4.2 Zvinhu zvekuchengeta mundangariro usati waisa iOS 11
5 IOS 11 Inoenderana Midziyo
5.1 IPad mhando dzinoenderana neIOS 11
5.2 IOS 11 Inoenderana iPhone Models
5.3 IPod inobata mhando dzinoenderana neIOS 11
Chii chitsva muIOS 11 ye iPhone
All Notices dziripo
Iyo iOS 11 yekuvharira skrini haina kupa rumwe ruzivo rwakawanda izvozvi, kwete chete izvo zvekupedzisira ziviso, asi zvakare inoratidza isu ichangoburwa uye iyo yatakamirira kudhonza chigunwe chako pasi pachiratidziri.
iOS 11 inotibvumidza kumisikidza iyo Driving Mode kuitira kuti kana ichiona kuti tiri kutyaira zivisa isu nezve chero kufona, meseji kana chiyeuchidzo.
Sekuvandudza kwakaita Apple iyo keyboard yeAppad, zvaitawo zvakafanana kune iyo iPhone, asi panguva ino, ichitipa sarudzo ye fambisa tsamba kuruboshwe kana kurudyi, kuti zvive nyore kwatiri kunyora neruoko rumwe.
Sunungura zvisina kushandiswa zvinoshandiswa
Vazhinji venyu mune chokwadi chekuti muvhiki rese munodhawunirodha mafomu akawanda kuti muaedze kuti aone kana achienderana nezvinodiwa uye muzviitiko zvakawanda, hamuna kuabvisa kana muchida kuapa mumwe mukana. iOS 11 inotipa sarudzo yekugara uchiita bvisa ese maapplication atisina kumboshandisa kwenguva yakati, hongu, kuchengetedza data rese kuitira kuti pane imwe nguva isu tinoda kuitora.
Meseji dzinoenderana kuICloud
Iyo Apple Meseji app pakupedzisira inosangana neICloud kuitira kuti tikwanise kuwana meseji dzatinotumira nekutambira kubva kune chero chinhu.
Mimwe mhedzisiro muiyo Meseji app
El eco effect iyo inozadza skrini nechinyorwa chemeseji uye iyo tarisa mhedzisiro izvo zvinotitaridza iwo mavara sekunge chiri chekutarisa mukonzati.
Iyi vhezheni itsva inotipa kunongedza kwakananga kune ese mapassword akachengetwa muICloud keychain kana tichida kuzvishandura, kubvunza kwavari kana kuvabvisa zvakananga.
Goverana Wifi neshamwari
Kana isu tichida kugovana password yeWifi neshamwari dzedu, hatifanirwe kutaurirana, asi isu tinokwanisa kukutumira kiyi otomatiki kuitira kuti chigadzirwa chako chigadziriswe pasina iwe unofanirwa kuita chero chinhu zvachose.
Mhoro kuFacebook neTwitter
Facebook ne Twitter Ivo havachawanikwe natively pane iOS, saka uchafanirwa kurodha pasi nekumisikidza izvo zvinoshandiswa kana iwe uchida kugovana zvakananga pane aya masocial network.
Nyowani App Chitoro
Apple ine rakagadzirisazve App Store kuronga ruzivo rwese rwainotipa, tichiwedzera otomatiki kuburitsa mavhidhiyo, zvinyorwa pamusoro pekushandisa, nyaya dzezuva nezuva kuitira kuti tiwane zvishandiso zvitsva, yakasarudzika mitambo tebhu, zvinyorwa zvekushandisa ...
Calculator nyowani nePodcast app
Ose ari macalculator uye iyo Podcast application yakagadziriswazve kupa iyo rakajeka uye rakachena dhizaini.
Yakagadziriswa vhoriyamu bar
Kana uchitamba mavhidhiyo kana mitambo kana tichida kuchinja vhoriyamu yeHUD yakatora chidzitiro chose. Apple ini ndakadzora saizi zvakanyanya kuti isanyanya kunyanyisa.
Yakawedzeredzwa modhi pane yekuvhara skrini
Kana isu tikamisa iPhone kekutanga, Apple inotipa sarudzo yekutipa iyo mifananidzo yakakwidziridzwa mune zoom mode kana mwero. Iyi zoom modhi ikozvino yave kuwanikwa pane yekuvhara skrini.
Idzva rekuvhara icon
Iwo iwo mapoinzi airatidza huwandu hwekuputira wakapa nzira kune iyo chinyakare bhawa kweupenyu hwese.
Mifananidzo yeDock hairatidze zvinyorwa zveapp
Kuti udzikise nzvimbo inogara nezvidhori, iyo nyowani vhezheni yeIOS haitiratidze zita rezvikumbiro ayo anowanikwa mudoko.
Idzva uye rakagadziriswazve Kudzora Center
Iyo nyowani uye yakagadzirwazve Control Center inotibvumidza isu simbisa izvo zvinhu zvatinoda kuoneka mazviri, kugona kuimisikidza kana kuimisa pasina kupinda mumamenyu. Ichi chave chimwe chezvinhu zvakajairika kudiwa nevashandisi veIOS, avo vakamanikidzwa kuenda kujeri kuti vanakirwe, asi sebasa rekurekodha skrini, iyo jailbreak-kutsamira iri kupera zvishoma nezvishoma. Ino itsva Control Center inotiratidzawo chiridzwa chemimhanzi, zvekuti hatifanirwe kuenda tichitsvedza nepamahwindo akasiyana atakapihwa neshanduro dzekare dzeIOS yeControl Center.
Nzvimbo nyowani yekuwedzera mwenje mutochi
Kutenda kune 3D Kubata tekinoroji, kubva kune iyo iPhone 6s isu tinokwanisa kuwana matatu akasiyana mazinga ehusimba muchiedza. IOS 11 nhanho nyowani yakawedzerwa, saka isu tine makumi mana zviripo zviripo.
Parizvino dai taive nechidimbu chekunyora rekodhi ye iPhone yedu, taifanira kuenda kujeri kupaza kana yechitatu-bato kunyorera komputa, asi neIOS 11, Apple inotibvumidza gadzira screen rekodhi zvakananga kubva pachigadzirwa zvacho.
Muzviitiko zvakawanda, patinotora skrini, tinoda kuratidza chikamu chayo, icho chakatimanikidza kushanyira reel uye kugadzirisa iyo pikicha. Zvino zvese zviri nyore, kubvira mushure mekutapa tinogona kuigadzirisa kuti tidimbure kana kuwedzera zvirevo izvo zvatinoda panguva iyoyo.
Gadzira yakatarisa chiso cheApple Watch
Pakati pesarudzo dzekugovana dzinopihwa neApplication application, isu tine sarudzo yeku gadzira nzvimbo yakasarudzika nemufananidzo watinoda.
Tsigiro yeGIFs pane reel
Zvakatora zvakawanda kuti Apple izive kuti maGIF ndizvo zvazvinotora izvozvi. Neshanduro iyi nyowani, isu pakupedzisira tichakwanisa chitoro uye ugovagovana kubva kune edu Mifananidzo reel.
Rarama Mapikicha zvakajeka kupfuura nakare kose
Kuguma uku kwakabva kuruoko rweiyo iPhone 6s kunotibvumidza kuti tigadzire mavhidhiyo madiki mu chiuno, bounce kana kuratidzwa kwenguva refu.
Dai pakanga paine mafirita mashoma atakawana muIOS 10, ine iyi vhezheni vhezheni, Apple yaisanganisira nyowani mafirita akafuridzirwa neyekutanga kutora mafoto kuburitsa inoratidzira, yakasikwa ganda matoni.
Iyo iPhone kamera ine iOS 11 inokwanisa otomatiki ziva QR kodhi uye kuratidza ruzivo kwarwunonanga, pasina kuisa yechitatu-bato kunyorera.
Bvisa chishandiso kubva kuZvirongwa.
Kunyangwe zvingave zvisina kubatsira pakutanga, Apple yakaunza basa rinotibvumidza isu bvisa chishandiso kubva kuZvirongwa yeiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
NFC yemunhu wese
iOS 11 ndiyo NFC chip kuvhura ye iPhone yedu inogona kutaura nemamwe majaira uchishandisa tekinoroji iyi.
Gadzira matafura muApple Notes
Iko kunyorera kunyorera kuri kuve imwe yeanoshandira iyo Apple iri kutarisira yakanyanya mune dzazvino vhezheni dzeIOS. Zvino Izvo zvinotibvumidzawo isu kugadzira matafura.
Mamwe mazwi echisikigo aSiri
Kutenda kune kungwara kwekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina, Siri inotipa iro rakasununguka izwi kuwedzera kune uwane kutaura, kuitira kuti isu tirege kuzoda kutaura naye sekunge irobhoti.
Siri chaiyo-nguva dudziro
Imwe yezvinhu zvitsva iyo yakanyanya kubata pfungwa yeiyo nyowani vhezheni yeIOS 11 ibasa rinotendera dudzira zvese zvaunonzwa munguva chaiyo kubva kuChirungu kuenda kuSpanish, Chinese, French, Italian uye German uye zvinopesana.
Dzimwe nguva, isu tinofanirwa kubvunza Siri asi ruzha ruri munharaunda hatitenderi kuti titaure zvakajeka naye. Ne iOS 11, tinogona nyora kubvunza kwedu.
Makuhwa kuApple Music shamwari dzako
Iye zvino tave kugona kuwana mimhanzi yese iyo shamwari dzedu dzakagovana paApple Music kuwedzera kune maalbum nezviteshi zvavanoteerera kazhinji.
Iyi yechipiri vhezheni yeAirPlay tekinoroji inotibvumidza isu kudzora izvo zvinotambwa mune yega yega odhiyo sisitimu mumba medu zvakazvimiririra, pamusoro pekudzora huwandu hwevose. nenzira yakazvimirira.
Chii chitsva muIOS 11 yePadad
Mushure mekuburitswa kwazvino kwemhando dzePad Pro, modhi umo Apple iri kuisa kufarira kwakawanda uye iyo parizvino inoita kunge iri kukwezva ruzhinji, vakomana veCupertino vanoita kunge vadzoka vafunga zvekare kupa imwe vhezheniZvirinani maererano nemabasa, uye iwe uri pakupedzisira unoteerera kune vashandisi vakagara vachichema kuti iyo Apple iPad yaive yakafanana chaizvo neiyo iPhone asi hombe.
iOS 11 haiunze toni yezvinhu zvitsva uye zvakasarudzika kune iyo Pro Pro, uye kupi Apple Penzura yakawana mukurumbira wakawanda kuva mudziyo inofanira kuva kuti wese mushandisi anofanira kutenga kana aine iyo iPad Pro modhi. iOS 11 ndiyo nhanho yekutanga kuti iyo iPad ive chishandiso icho munguva pfupi inogona kutanga kutsiva makomputa mazhinji, zvirinani mudzimba umo iko kushandiswa kwadzo kuri kushoma.
Kuve nemaneja maneja muApple's iOS ecosystem yakagara iri imwe yezviroto zvevazhinji vashandisi. Nekuda kweFaira application tinokwanisa kuwana mafaera ese atakachengeta kwete muICloud chete, asi tinokwanisa zvakare kuwana ese mafaira atakachengeta muDropbox, Bhokisi, Google Drive, OneDrive, Adobe Creative Cloud… uye nekudaro unokwanisa kuzarura nekukurumidza.
Tinogona kuona kutsvaga pane ese masevhisi ekuchengetedza pamwe chete, chimwe chinhu icho vashandisi vanoshandisa rinopfuura rimwe sevhisi yerudzi urwu pasina mubvunzo vanofarira zvakawanda. Inotipawo iyo tabo iyo yatinogona kukurumidza kuwana mafaera atichangobva kuvhura kana atakabvisa. Uye zvakare, inotipa mukana wekuwedzera ma tag kumafaira kuti uwane iwo nenzira yakapusa.
Iyo Dock yezvishandiso yave iri imwe yezvinodiwa zvevashandisi verudzi urwu rwechigadzirwa. Tinogona kuwana iyo Dock kubva kune chero application nyore inotsvedza chigunwe chako mudenga, uko kwekupedzisira kuvhura kunyorera kuchizoratidzwa pamwe neaya atakatonyatso gadza.
Kana uchivhura zvinoshandiswa paIpad, inopfuura imwe panguva imwe chete, kusvikira iOS 11 taifanira kutsvedza munwe wedu kurudyi kwechiratidziki kwariri, kuitira kuti zvese zvinoshandiswa zvinoenderana nebasa iri zvionekwe. IOS uye nekutenda kune iyo Dock, isu tinongofanirwa kudaro tinya pane chishandiso chatinoda kuvhura uye kudhonzera kuchiratidziri kuzviisa parutivi rwatinoda, kungave kuruboshwe kana kurudyi.
Apple haidi kunzwa nezve mukana wekuti pane imwe nguva mune ramangwana, iPads inogona kushandisa shanduro yakajeka yemacOS. Kuti uite izvi, hazviregi kuwedzera mabasa kuitira kuti vanofarira mbeva vasarasikirwe nemamwe mabasa ayo angangoda nhamba yakakura yematanho. Nekuda kwekudhonza uye kudonhedza basa, tinogona, semuenzaniso, kutumira email ine yakanamatira mufananidzo, mufananidzo watakakoka kubva kubhurawuza kwairi kuti iko. Tinogona zvakare dhonza mifananidzo kana mafaera pakati pezvimwe zvinoshandiswa nekukurumidza uye nyore.
Apple Penzura inonyanya kukosha
Iyo Apple Penzura yakawana yakawanda mukurumbira neIOS 11, kubvira ikozvino yakanyanyisa kuita uye yakasikwa kupfuura nakare koseNekuti isu tinogona kuishandisa kune yakawanda nhamba yemabasa senge kutora zvinyorwa, kugadzira madhayagiramu, kugadzira zvirevo pane iyo PDF faira, tinogona kusaina chero gwaro mukuwedzera kurizadza mukati nekutumira kune rinogamuchira ...
Mutsva QuickType keyboard
Kune vese vedu vanoshandisa iyo iPad kunyora zvinopfuura zvakafanira, Apple yakavandudza iyo QuickType keyboard, ichitipa mukana wekuwana ese manhamba uye akakosha mavara inotsvedza chigunwe chako pasi pakiyi kwazviri, kuitira kuti tirege kuchinja pakati pemakhibhodi akasiyana, zviratidzo kana manhamba ayo akatipa kusvika zvino.
Chii chitsva muIOS 11 yakasarudzika kune iPhone X, iPhone 8 uye iPhone 8 Uyezve
Kuvhenekera mu Portraits.
Kutenda kune akanakisa akagashirwa maPhones matsva, kunyanya kamera yekumberi yeiyo iPhone X, ine iOS 11 yatinogona wedzera mwenje kumifananidzo yedu kuitira kuti vape mhinduro yehunyanzvi.
Basa iri inongowanikwa pa iPhone XSezvo uchikwanisa kuratidza emojis nemasaini edu, zvinofanirwa kuve neiyo TrueDepth kamera, iyo inongowanikwa pane ino kifaa. Iyi kamera inoongorora mashandisirwo makumi mashanu emhasuru anoshandiswa kuratidza kutaura kwedu. Kuti uite kudaro, Apple inogadzira anosvika gumi nemaviri Animoji anowanikwa kwatiri. Kuburitswa kweaya mavhidhiyo mapfupi kunogumira kune vashandisi veMessage application.
Maitiro ekuvandudza kune iOS 11
Kana Apple yaburitsa vhezheni yekupedzisira yeIOS 11, panguva yekutanga maawa maitiro ekurodha pasi anogona kutora maawa mashoma, sezvo munhu wese achida kutanga kunakidzwa nenhau dzichangoburwa dzinobva paruoko rwechizvino system yekushandisa, saka kana iwe ukakwanisa kumirira maawa mashoma, iyo yekurodha maitiro ichakurumidza uye hauzove nefoni yakaremara kwenguva yakareba kudaro.
Kune akati wandei mavhezheni eIOS, chishandiso chedu chinobva chatarisa kana paine vhezheni itsva yeIOS inowanikwa kurodha pasi, ingave yekuvandudza kana yekupedzisira vhezheni. Kana zvirizvo, iyo Zvirongwa icon ichatiratidza chiziviso kuitira kuti tigone kuwana uye kurodha pasi. Asi kana iwe usiri kuda kumirira, iwe unofanirwa kuenda kuZvirongwa> General> Software kugadzirisa. Maminitsi mashoma gare gare iyo nyowani nyowani ichaonekwa.
Ndiwedzere kana kuisa kubva pakutanga?
Kana isu tikagadziridza chishandiso chedu neshanduro nyowani, zvese zvinoshandiswa, masevhisi uye zvimwe zvawakagadzirisa ichave ichiwanikwa kana iko kugadzirisa kwapera. Dambudziko nderekuti kana mashandiro echigadzirwa chako asina kukwana, matambudziko ese awakange uine kusvika panguva iyoyo acharamba aripo, saka mune idzi kesi sarudzo yakanakisa ndeyekuita kopi yedata kubva kumagumo edu, kunyangwe iwo mifananidzo., zvinyorwa uye nezvimwe, kuburikidza neICloud kana zvichibvira. Nenzira iyi isu tinogona kuita yakachena kuisirwa kubva pakutanga uye kudzoreredza data rese zvakananga kubva kuICloud, chete iyo data, kwete izvo zvinoshandiswa.
Kuti utore maapplication isu tinofanirwa kuenda kuApp Store yeedu terminal, ingave iPhone, iPad kana iPod touch kubvira maitiro aya atove hatigone kuzviita kuburikidza iTunes, nekuti iko kwekupedzisira kugadzirisa kweizvi kunyorera kwakabvisa mukana wese wekugona kutenga, kurodha pasi kana kuendesa mafomu kune yedu kifaa inotungamirirwa neIOS. Chatinogona kuramba tichiita neTunes kugadzira kopi yekuchengetedza yeitara yedu, kopi inotibvumidza kuti titorezve zvese zvirimo pamwechete, hapana chimwezve.
Ramba uchifunga kuti kana iwe wanga uchifunga kugadzira backup, kuisa iOS 11 kubva pakutanga uye kurodha backup, iwe unenge uri mudambudziko rakafanana nekunge iwe uchigadzirisa kubva kuchiteshi zvakananga kune iyo nyowani vhezheni yeIOS, nekuti rese data iro rinogona kukanganisa mashandiro ezvimwe zvinoshandiswa uye nekudaro kudzora chinouraya, acharamba aripo. Usati waita iyo yekuvandudza, iwe unofanirwa kuita kopi, kopi iyo ichakubatsira iwe kudzosera chishandiso kune yekutanga mamiriro pamberi peiyo yekuvandudza, kana iwe ukaona kuti iko kuita kweiyo nyowani vhezheni yeIOS hakukugutsi iwe uye iwe unoda kumirira iyo yekutanga yekuvandudza iwe yaunogamuchira.
Zvinhu zvekuchengeta mundangariro usati waisa iOS 11
Semazuva ese uye kunyangwe Apple ichiita zvese zvinogoneka kudzikisa nzvimbo inogarwa neyakagadziridzwa yega yega, haigone kuita zvishamiso, saka iwe unoda angangoita 4-5GB yemahara nzvimbo pane yako kifaa kuti iyo yekupedzisira vhezheni, iyo inobata nezve 2 GB, inogona kutorwa pasi uye kuiswa nenzira kwayo.
1-inch 2st uye 12,9nd chizvarwa iPad Pro.
iPad Mhepo 1 uye 2
iPad 2017 - yechishanu chizvarwa
iPad Mini 2, 3 uye 4.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iOS 11
Kana iwe uchida kufona kune ivo vaunofarira haina kurega iwe, unofanirwa kupinda mu! bata uye sarudza foni, inoisa application isingazivikanwe, nei?
Pindura kuna Sony
Ndiine iOS 11 ndinogona kutora mifananidzo mhenyu pane yangu iPhone 6?
JOSE ANTONIO ISLA GARCIA akadaro
Pane imwe nguva IOS 11 yaiswa, izwi rekutsvaga injini harishande kwandiri.
Izvi kwandiri zvakakosha.
Semuenzaniso, ini ndinoenda kukarenda ndomuudza kuti anditsvagire kuti mangani zviitiko zvandiine neshoko rimwe chete. Ndinoziva pane zvisere uye zvinongobata 8. Izvi zvinoitika kwandiri neIPhone 2 Plus uye iyo IPAD.
Ndakayedza kanoverengeka uye mhinduro yacho inogara yakafanana.
Pindura kuna JOSE ANTONIO ISLA GARCIA